ahoana no miresaka tovovavy iray eny an-dalambe. (Fifandraisana, ny Vehivavy, ny Ankizilahy)
Posted on 11.03.2019, 13:48 By Goodsite
Aho, ary tsy manana Olana aho dia tena menatra, raha te-antso ho amin’ny ankizivavy fantatro foana fantatro izay milaza ny zavatra mety ho toro-hevitra amin’ny fomba aho ho any amin’ny resaka miaraka aminy, handeha aho mba hangataka ny fomba, sy ny ho ahy, ity amin’ny antsipiriany hazavao. Angamba. Tiako ny manontany ny fanontaniana maro, ohatra, araka ny tsara indrindra gilasy parlour. Izay manontany izay mitarika ny resaka. Mba te hihinana azy amin’ny gilasy ho Anao. lazao azy fa ianao manao Tafatafa iray (noho ny fialan-tsasatra lahatsoratra.). tianao ho fantatra, inona no fanontaniana ny zazalahy tsy maintsy, mba handresy ny fony. raha toa ianao ka alemana sy ny nanafoana ny, dia nanafoana ny faingana eh very ka rehefa mamaly izy, anontanio azy ny minitra taty aoriana mihitsy io fanontaniana io. IZANY dia efa taona maro lasa izay) na tsia. Ianao mbola tena tanora sy milamin-tsaina, matetika eo anivon ny olona mba hahazo fahatokisan-tena sy mba hianatra ny hahatsiarovanareo izany foana sy ny fahalalam-pomba. Ahoana no tokony aho mamaly tsara ny tovovavy iray eny an-dalambe tsy misy fa matahotra aho na dia saro-kenatra aho. Hi. Be dia be ny Eny, raha ny ankizivavy toa anao eny an-dalambe sy ny tsiky mba tokony ianao valiny. Afaka manaiky izany. Ary tokony, izaho dia tovovavy tiako eny an-dalambe ny adiresy. Fa ahoana. Milaza fotsiny Hi. Lehibe, ary ny fomba mba handeha ho an’ny amin’ny tafatafa avy eo. Misaotra noho ny valin-hi te-hanontany raha misy olona manana ny hanangana ny soso-kevitra toy izany dia afaka mandresy izany dia mora kokoa ho an’ny tovovavy tsara tarehy tao amin’ny fiaran-dalamby na fotsiny eny an-dalana ny Fomba ny tovovavy rehefa misy izany. Ve ianao raha ny ankizivavy no miandrandra, dia handahatra ny Zazalahy kely iray fotsiny ianao mba namana. Toro-hevitra vitsivitsy momba Volt. izaho saro-kenatra kely, sy ny taona maro, izaho dia manomboka ao Mendrika ary koa ny antso ho amin’ny ankizivavy Hey, izaho no nahatsikaritra ary izaho any am-pianarana ho an’ny sasany ny fotoana, tena tovovavy tsara tarehy amin’ny tena. aho, dia nieritreritra ny herinandro raha tokony hiresaka aminareo amin’ity herinandro ity amin’ny ahy ao amin ny Fotoana heverina fa isika izao no fety ary noho izany dia tsy afaka ny antso. Te hanoratra ho anao amin’izao fotoana izao ao amin’ny Facebook ny fotoana, fa tsy izaho no te-hanoratra toy ny hey, na hi, aho te-hanoratra, na inona na inona mba Intrusive. Izy dia tena tsara tarehy sy ity aho wow fihetseham-po aho rehefa mahita anao nahoana tiako izany ho ahy amin’ny alalan’ny Facebook na ny zavatra hafa mivantana amin’ny mess up. Tiako ny zavatra izay azo antoka fa tsara tarehy izy manoratra indray. Tsy fantatro, kely famaritana ny ahy afaka entana aho fa fantatro izay afaka milaza ny ahy. azonao atao ny ahy angamba toro-hevitra vitsivitsy. mety ho tena manan-danja ho ahy, raha afaka hanome ahy na inona na inona soso-kevitra, dia afaka angamba hanome ahy ny sasany torohevitra momba ny fomba tokony hiresaka aminao amin’ny tsara indrindra, satria mihinana crème glacée dia handeha ao amin’ny Ririnina, tsy mety indrindra: Ianao manantena fa ho afaka hanome ahy misy soso-kevitra aho dia te-hanome izany ho azy tsy ho korontana izany ka Misaotra mialoha miaramila trondro aho dia mahazo ny maro ny mampamangy amin’ny ankizivavy ny fomba mahafatifaty na tsara tarehy mahazo aho, afa-tsy aho feno resy sy tena saro-kenatra ny ao Anatiny. Aho Izaho koa tsy niresaka tamin’ny vehivavy iray teo amin’ny fiainako, foana ianao no amiko, manomboka ny resaka, fa loatra aho saro-kenatra sy ny ady saika tsy nisy teny avy amin’ny toy izany kisendrasendra ny resaka ary avy eo ny vehivavy lobes koa dia tsy liana toy izany jammer tahaka ahy. Amin’ny teny alemà fanatanjahan-tena Oniversite ao Cologne ranonorana mpianatra miaraka ny Miboridana sy ny fitafiny koa dia tsy nisaraka. Dia ny mamela. Misy ankizivavy iray ny vondrona tanora ao amin’ny Fiangonana, ao ny tena tiako. Saingy tsy haiko hoe ahoana no hilaza azy, ary na izy koa madly amin’ny fitiavana amiko. Aho tena saro-kenatra. Dia ho faly aho raha na iza na iza afaka manome soso-kevitra ny ahy. Heym, ny ankizivavy sy ny vehivavy: Squirts ny fifehezan-tena na ny Firaisana ara-nofo. Ny ry zalahy ny olona mahita squirting lehibe na mafana. Ny zanako lahy (taona) no naka ny andro hafa ao amin’ny dobo filomanosana iray taona zazavavy, ary niezaka mba hanoroka ny vadiko nahatsikaritra ny fomba izany dia nanohitra avy hatrany azy an-trano. Indrisy anefa fa, tsy mipetraka amin’ny tanàna kely, tiantsika ny Zazalahy tsy mahazo laza toy ny ratsy fanahy. Noho izany dia niresaka tamin ilay zazavavy, insistently, fa tsy afaka milaza na iza na iza, ary dia hanasazy azy noho izany. Efa niala tsiny, nahazo ny volana ambenana an-trano, ary isika. dia handefa izany haingana fitsipika fandrefesana ny psikology ao amin’ny tanàn-dehibe akaiky indrindra, Ny hevitra hamahana tonga avy ny vadiko aho, dia, na izany aza, toy izany koa ny eritreritro raha izany dia ampy Fotsiny ny tsy tiako ny Zazalahy aho, dia tena ho Mpivadika toe-Draharaha ao amin’ny fanantenana ho an’ny torohevitra tsara tsy mitonona anarana ao amin’ny Aterineto: Ny tovovavy tsara tarehy miresaka aminao, inona ianao no nanao hoe.
Zava-misy: Ny zazavavy izay tsy tianao, dia toy ny manana ny maro. Ianao dia manome azy ny Fahafahana. Zava-misy: vahiny tanteraka miresaka anao eny an-dalambe.
Hey aho ary mba te-hanontany ahoana no m araka ny tena mahafantatra tsara, ohatra, ao amin’ny an-dalana, eny amin’ny toeram-Pivarotana, na aiza na aiza eo anoloan’ny ankizivavy izaho sy ianao no miresaka sy anao aho ny isan’ny fanontaniana) tsy milamin-tsaina, nefa koa tena matoky fa raha te-antso ho amin’ny ankizivavy, foana aho mieritreritra momba ny fomba mangidy izany dia ny vola tao anatin’ny harona, ary izany foana no mahatsapa toy ny w r izaho zavatra ratsy kokoa noho ireo aho dia te-antso. (Aho fa tsy ratsy na inona na inona toy izany koa, mahazo tsara amiko, ny eritreritra tonga ihany ny Adiresy.) Ahoana no manala ireo eritreritra ary tena matoky ny Valiny.) Misaotra anao mialoha. Aho hijery fotsiny toy ny maro hafa, Schindler ny lisitra. Ny zava-niseho tamin’ny zazavavy kely mitafy ny mena akanjo.
Inona no miaraka izay. Ny Sarimihetsika manontolo dia mainty sy fotsy. Inona moa izany amin’ny mena akanjo. Ny fankatoavana. Tiako hambara, rehefa tapitra ny tovovavy dia hita indray mandeha indray ny maty. Izany zavatra izany. Tiako ny milaza izany ny ankizivavy iray, izay heveriko fa tsara, fa isika no mbola us fantatro.
Aho vult, somary saro-kenatra, ary mampanantena ny mampanahy ahy. eny ary, ny fanontaniana dia hoe ahoana no miresaka amin’ny tovovavy sy ny fomba tsy maintsy mitantana ny resaka ka dia afaka mahazo ny maro, indrindra fa ny zavatra azoko lazaina amin’ny resaka. androany aho nandritra ny Fety, dia efa miaraka amin’ny mpiara-miasa ao amin’ny trano-lay izay vondrona iray kilasy
← Tranonkala maimaim-poana ny Fiarahana tsy misy fisoratana anarana
Web fakan-tsary firesahana amin'ny →
© 2019 Lahatsary Firesahana Amin'ny Tontolo